Xildhibaano iyo odayaal cambaareey weerarkii lagu qaaday Axmed Daaci – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Qaar ka mid ah odayaasha degmada Wadajir ayaa maanta cabasho u gudbiyey xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee ka soo jeeda Beelaha Hawiye, kadib kulan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Kulanka xildhibaanada iyo odayaasha degmada Wadajir ayaa lagu cambaareeyayweerarkii labo maalmood ka hor ay ciidamada dowladda iyo AMISOM ku qaadeen degmadaas maalintii Jimacaha.
Odayaasha ayaa sheegay inay ka cabanayaan khasaare xoog leh oo ay sheegeen in shacabka ay ka soo gaaray howlgallo ay ciidamada amniga iyo kuwa AMISOM ka fuliyeen dhawaan degmada Wadajir.
Waxa odoyaashu ay sheegeen in 30 ruux ay ku dhinteen 40 kalana ay ku dhaawacmeen howlgalkii labo maalmood kahor ka dhacay degmadooda.
Mid ka mid ah Odayaasha degmada Wadajir oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay inay cabasho ka qabaan qaabka uu u dhacay weerarkaas ee xilli habeen saq dhexe ah shacabka deegaanka madaafiic iyo rasaas lagu soo miray.
“Cabashada aan qabno waxaa ka cabaneynaa weerar dowladeed oo hubeysan, waliba Mir ah, hadaan shacabka Wadajir nahay aanan fileyn in dowladda na mireyso, ayadoo amar na siin oo wax na weydiin hadii nala weydiiyana aanan diidin, waligeen amar dowladdeed kama hor imaan”ayuu yiri Xasan Maxamed Maxamuud.
Sidoo kale Nabadoonka ayaa sheegay in waligood ay arki jireen weerar habeen oo Al-Shabaab ku soo qaadi jireen, isla markaana ay degmada difaaci jireen, waxaana uu intaa ku daray in weerarkaas ay ku dhinteen sodon qof, halka afartan kalena ku dhaawacmeen sida uu yiri.
“Waxaa arki jirnay Mir habeen oo Al-Shabaab nagu soo qaadi jireen, degmadaan ku difaaci jirnay deegaanka iyo dowladda, laakiin hadaan shacabka deegaanka nahay weerarkaas waxaa amray madaxda dowladda dhibkaas ayaa u sheeganeynaa, sodon qof ayaa duugnay afartana isbitaalo geynay, waxaa idaacadaha ka maqleynay in madaxda nabadsugida ay leeyihiin wax dhimasho ah ma jiraan”ayuu mar kale yiri Nabadoon Xasan Maxamed Maxamuud.
Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhibaatada shacabka ka soo gaartay weerarkaas, isagoo tilmaamay in weerarada nocoaan oo kale ee aan loo meel dayin ay wiiqeyso dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
“Dadka hubka heysta ee shacabka ah in laga qaadaa oo gacan dowlo hubka isku uruuro wixii ka maarmi waa qof iyo labo loo reebo inay sax tahay, laakiin sida loo wajahay oo deg degta iyo orodka ka muuqda ee ay Xukuumada u wajahday ee tashi la’aanta oo aan Xildhibaanada lagu wargelin, odayaasha lagu wargelin ee qofka hubka heysto la war gelin aad ayaa uga soo horjeednaa”ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dhibaatada kala dhalatay ay ka soo horjeedaan, isagoo ku eedeeyay in AMISOM inay shacabka madaafiic la dhacdo, iyadoo dalka u timid inay bad-baadiso sida uu yiri.
“Ciidamada AMISOM ee dalka u yimid inay shacabka bad baadiyaan inay taangiyo ku xasuuqaan aad ayaa u cambaareynaa, waliba xilli saq dhexe ah xaafado la degan yahay iyo guryo la degan yahay inat tagaan oo ay taangi ku xasuuqaan aad ayaa uga xunahay, waana cambaareynaa”ayuu yiri Xildhibaan Abtidoon.
Xildhibaan C/raxmaan Kulmiye Xirsi (C/raxmaan Dheere) ayaa sheegay in Xukuumada looga baahan yahay inay ka fiirsato tallaabooyinka ay qaadeyso, ee waxyeelada ka soo gaareyso, isla markaana aanay dib dambe u dhicin.
Sidoo kale Xildhibaanada kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Xildhibaan C/qaadir Cosoble, Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo Xildhibaan Cumar Filish oo dhamaantood sheegay inay aad uga xun yihiin weerarkaas iyo sida uu u dhacay, iyagoo si kulul u cambaareeyay.
Jimcihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM waxey xilli habeen ah weerar ku qaadeen guriga uu degmada Wadajir ka degan yahay Axmed Xasan Cadow (Daaci), kaasoo ahaanjiray gudoomiyaha degmadaas.
Weerarkaas ayaa sababay in dagaal xoog leh dhaco, islamarkaana markii dambe laga itaal roonaado maleeshiyadii Axmed Daaci, hub badana laga qaado.